*Speak from My Heart*: July 2011
စလေမြို့ မှ တခိုးကြီး ဘုရား နှစ်ဆူ
မေမေ့အိမ်ကို ပြန်စဉ်က စလေမြို့ ကို အလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ စလေမှာလည်း ကျောင်းတက်တုံးက သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ အိမ်တွေကိုတော့ အလည်သွားခဲ့ရပေမယ့် အမျိုးအိမ်ကိုတော့ မရောက်ခဲ့ရပါဘူး။ မသွားတာကြာတော့ အိမ်ပျောက်နေတာမို့မဝင်ခဲ့ရတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းက သွားခြင်တဲ့နေရာတွေ ဘယ်လိုသွားရမလဲ မေးတာနှင့် သူကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ ပေးပါတယ်။ သူငယ်ခြင်းက လိုက်ပို့ပေးလို့ဖူးခဲ့ရသော ဘုရား(၂)ဆူကို အများဖူးမျှော်နိုင် စေရန် ရိုက်ယူခဲ့မိသော ပုံများကို ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်တာပါ။ စလေနှင့် ဆိတ်ဖြူမြို့ တွေဟာ ပုဂံခေတ်ကနေ ယနေ့ ထက်တိုင် တည်ရှိနေတဲ့ မြို့တွေပါ။ ပုဂံခေတ်ကတော့ အတော်ကို စည်းကား ကြီးကျယ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဘေးက မြို့ တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ မြို့ငယ်လေးတွေ အဖြစ်ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲပါပဲ။
စလေသူ၊ စလေသားများကတော့ သူတို့ မြို့ ကို ပုဂံငယ်လို့တင်စားပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဘုရားတွေနှင့် ပုဂံမှာလိုပဲ ပြည့်နေလို့ လို ဆိုတာပါပဲရှင်။ စလေနားက ရှင်ပင်စာကြို ဘုရားကြီးကိုတော့ ဒီတခေါက် မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မဟာမုနိ ဘုရားဆင်းတုတော် မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ပင့်ဆောင်လာရာ စာလေးငှက်ငယ်များက ဘုရားကို လာကြိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသမိုင်းကို ပြောကြပါတယ်။ ဘုရားပင့်လာတဲ့ ဖောင်တော်ကိုလည်း ဒီနေရာမှာ တစ်ထောက်နားရင်း ဘုရားတည်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မရောက်ခဲ့တာမို့ဘုရားပုံတော်ကိုတော့ မတင်ပေးနိုင်တော့ပါဘူ။
ဒါပေမယ့် ခုတင်ပေးမယ့် ဘုရားပုံကတော့ ရခိုင်ဘုရားပါ။ ဒီဘုရားဆင်းတုကလည်း မုနိတဆူ ဖြစ်တယ်လို့သူငယ်ချင်းက ပြောပြပါတယ်။ ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ လည်း သူငယ်ချင်းကပြောပါတယ်။ အလွန် သပ်ပါယ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဘေးမှာပဲ တည်ရှိပါတယ်။ မြို့ ကနေ မလှန်း၊တလှန်မှာ တည်ရှိနေတာပါ။
အတွင်း ဝင်သွားတော့ မြင်ရတဲ့ပုံပါ။ ဘုရားက မြို့ နှင့် လှမ်းတော့ စောင့်ရှောက်ဘို့မိသားစုတစ်စုက ဘုရားဝန်း အတွင်းမှာ နေတာမို ၊့ သော့ပိတ်ထားတဲ့ အတွင်းတံခါးကို လိုက်ဖွင့်ပေးမှ ဝင်ဖူးလို့ ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံထဲကထက် အပြင်မှာတော့ ရွှေသားအတိဖြင့် ဆင်းတုတော်ကို ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဖူးမြော်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဆင်းတုတော်ကတော့ ရွှေချထားတာပါ :P)
နောက်တစ်ဆူကတော့ မံဘုရားပါ။ ယွန်းဘုရားတစ်ဆူ အဖြစ်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှီးများဖြင့် ယက်လုပ်ထားပြီ၊ သစ်စေးများဖြင့် သရိုးကိုင်ထားကာ၊ ရွှေချထားသော ပုဂံဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံဘုရားတွေ မြစ်ထဲမျှော်ပါစဉ်က ဘုရားဆင်းတုတော်သည် ယွန်ထည်ဖြစ်သောကြောင့် မြစ်ရေမှာ ပေါလော မျှောပါလာတာကို စလေမြို့ ခံများက ဖူတွေ့ ရတဲ့အတွက် ရေထဲကို ဆင်းဆယ်ယူပြီး မြို့ပေါ်မှာ ကျောင်းဆောက်လှူဒန်းလို့ပူဇော်ထားတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကပဲ ဘုရားရဲ့ကျောဘက်က အမိုးရေယိုရာမှ ဆွေးမြေ့ ပျက်ဆီးခဲ့လို့အမိုးများကို လုံခြုံအောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ ယွန်းပညာရှင်များနှင့် ဘုရားကျောဘက် အပျက်အဆီးတို့ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်လက်ရာဖြစ်ပြီး ကြည်ညိုဖွယ် ဖူးမျှော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်စုံကျောင်းမှာ ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေက နည်းနည်းများတာမို့ လို့နောက်မှ သက်သက် ခွဲးတင်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ စလေမြို့ ရဲ့အရိပ်အယောင်ကို မတွေ့ ရပေမယ့် စလေက ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘုရားနှစ်ဆူကို ဖူမျှော်ကြပါအုံးလို့ပြောရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါပြီနော်။ ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 1:52 AM
မြို့ လယ်မှာ တခါတရံ၊ လူတွေကြားထဲ နေခြင်သလိုနေ၊ သွားခြင်ရာ လျှောက်သွားနေပြီး စိတ်မနှံနေတဲ့ လူတွေကို ရံဖန်၊ ရံခါ ကြုံရ တွေ့ ရဘူးကြမှာပါ။ မြို့ ပြတွေမှာတော့ လိုင်းကားတွေပေါ်မှာ ပါလာတတ် ပါသေးတယ်။ နယ်လေးတွေမှာတော့ ဧရိယာကျည်းတော့ မြို့ ခံလူတွေနှင့် အမြဲလို တွေ့ ကြုံနေရတတ်တာပါပဲ။ တခါတလေလည်း ကိုယ့်မြို့ က အရူးကို တမြို့ နှင့် တမြို့ ကူးနေသော လိုင်းကားပေါ်တင်ပေးလိုက်တတ် တာတွေလည်း ရှိရဲ့ ။ ကျမတို့မြို့ လေးမှာလည်း မွေးကတည်းက နေလာပြီ၊ စိတ်နှောက်ကျရာကနေ သေတဲ့ အထိ နေသွားတဲ့ သူတွေလည်း၊ သုံးယောက်လောက် ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ သူတို့ ကိုသွားစပြီဆိုရင် တကယ်လည်း ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း တုံ့ ပြန်ကြလေ့ ရှိတယ်။
ကျမတို့ငယ်ငယ်တုံးက ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အရူးမတဦး နံမည်က `ပူးစူးမ`တဲ့။ စိတ်ဆင်းရဲမူ့ ဒဏ်ဖိစီးလို့သာရူးသွားတာပါ။ အဝတ်အစား အလွန်လုံခြုံပါတယ်။ သူမ၏ ဖခင်က အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်သင်ပါတယ်။ ကျမတို့မေမေတောင် ဒီဆရာ့ရဲ့ကျူရှင် တက်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။ ဖခင်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ကိုင်စားရင် ကြွေးပူလို့ ပဲ ရူးသွားတာလိုလို ကြာခဲ့ဘူးပါသည်။ အရူးမမို့ များ ထိရမယ် မထင်ပါနှင့် ယောင်္ကျားတွေနှင့် စကားတောင် မပြောပါဘူး။ စရင်လည်း ကုန်းအော် တုတ်တော့တာပါပဲ။ စိတ်တိုအောင် စရင်တော့ လူကိုတောင် လိုက်လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ တကယ်ကို ကြမ်းပါတယ်။
နောက် အထင်ရှားဆုံး နှင့် ကျမ အကြောက်ဆုံး အရူးတစ်ယောက်ကတော့ `အရူးသိမ်းအောင်` ပါ။ သူက ကျမတို့အိမ်ရှေ့စိန်ပန်းပင်အောက် သစ်မြစ်ဆုံ ခွကြားက မြေပြင်ပေါ်အမြဲထိုင်လို့နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ရှောက်သွားလို့မရှိပါဘူး။ သူလာထိုင်နေရင် ကျမက ကလေးဆိုတော့ အပြင်မထွက်ရဲပါဘူး။ မေမေကခိုင်းလို့အိမ်ပြင်ထွက်စရာရှိရင် အိမ်ကျော်တဲ့ အထိ ဖေဖေကို လိုက်ပို့ ခိုင်းပြီးမှ သွားပါတယ်။ သူကလည်း သိတယ် ကြည့်ပြီ ပြုံးနေတတ် ပါတယ်။ ဖေဖေကတော့ တခါတလေ ငှက်ပြောသီးလေး ဘာလေး ထွက်ကျွေးတတ်တော့ သူက ဗိုက်ဆာတုံး ဖေဖေ့ကို မြင်ရင် မုန့် လာ တောင်းတတ်ပါတယ်။ လာတောင်းရင်တော့ ရှာကျွေးရတာပေါ့လေ။ သနားတော့ သနားပါတယ်။ အရူးထောင်ကို ပို့ လိုက်သလို ကြားပြီး ပျောက်သွားပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ထွတ်လာပြီ ကျမတို့အိမ်ရှေ့ တခါ ရောက်လာပြန်တာပါပဲ။ သေတော့လည်း ကျမတို့အိမ်ရှေ့ထောင့်လေးမှာပဲ သေသွားလို့ရပ်ကွက်ကပဲ မြေမြုပ်သဂြိုဟ်လိုက်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်ကလာမှန်းမသိတဲ့ စိတ်နှောက်နေသူတွေ ထဲကနေ အသက်(၄၅-နှစ် ၅၀) လောက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦး ကျမတို့ မြို့ မှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ဈေးရှေ့ က အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ရှိတဲ့ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦးရှေ့ က လှေခါးထစ်တွေမှာ တခါ တခါ မနက်ပိုင်း၊ တခါ တခါကျတော့လည်း တနေ့လယ်လုံး မလုံခြုံတဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယင်ပုံတွေနှင့် ပါးစပ်က ပေါက်တတ်ကရတွေ အော်ဟစ်ပြောရင်း ထိုင်နေလေ့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်လုံး၊ ကိုယ်ထယ်ကလည်း ခပ်ထွားထွားမို့အဝေးကပင် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရတဲ့ သူပေါ့ရှင်။ ၁၉၉၄-၅ ခုနှစ် ကာလများကပါ။ ဈေးဘက်ကို ဈေးဝယ်ဘို့ ၊ မေမေ့ဈေးခြင်းလိုက်ယူဘို့ ၊ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် သွားရင်းလာရင်း အကြောင်း အားလျှော်စွာ ဖြတ်သွားရလေတိုင်း ဒီအမျိုးသမီးကိုတွေ့ရမြဲပါပဲ။
သွားပြန်တော့လဲ မြင်ရတယ်၊ မြင်ရတော့လဲ အသံတွေကြား(သူမက တခါတလေ ဖြတ်သွားတဲ့ လမ်းသွား၊ လမ်းလာတွေကို အော်ဟစ်ခေါ်နုတ်ဆက်တတ်ပါသေးတယ်။) တော့လဲ မကြည့်ဘဲ မနေနိုင် ပြန်ပေါ့လေ။ ခပ်ဝေးဝေးကပဲ သွားဖြစ်တာပါ။ လှမ်းဆွဲးလိုက်မှာ ကြောက်လို့ လေ။ :D ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ မှန်သမျှလည်း ကြည့်သူကကြည့်၊ ရှောင်သူက ရှောင်ပေါ့လေ။ သူမက ထိုင်ရင် လုံချည်က အောက်စလွတ် နေတတ်ပြီး၊ ရင်ဘက်က ဟောင်လောင်း ဖြစ်နေတာကိုး။( မြန်မာနိုင်ငံမှ စိတ်မနှံ့ တဲ့သူတွေသာ အသိစိတ် မရှိမှ ဒီလိုလုပ်တတ်ကြတယ်လို့ထင်လို့ လားမသိပါ။။ ကျမတို့ မြို့ က တခြားစိတ်မနှံ့ တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆို သေတဲ့အထိ လုံခြုံတဲ့အင်္ကျီ၊ လုံချည်ရှည်နှင့် တခါမှတောင် ဘာဆို၊ဘာမှမပေါ်အောင်နေသွားတာပါ။ )
သူမကို ပထမစတွေ့ ဘူးစဉ်က ၁၉၉၂ လွန်များဆီက ထင်ပါတယ်။ အချိန်ကာလ တော့ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ သူ့ ကိုတွေ့ ပြီး ၃-၄ လလောက်ကြာတော့ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဘယ်ကလာမှန်းမှ မသိတာ ပြန်ပျောက်သွားတော့လဲ တခြားနေရာ ရောက်သွားပြီလို့ ပဲ ယူဆလိုက်ရတာပါပဲလေ။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေပြီးခါမှ တစ်နှစ်၊နှစ်နှစ်လောက် နေပြီးမှ တစ်ခါ ဒီပုံစံနှင့် ပြန်ပေါ်လာပြန်တော့လဲ အားလုံးက ဘာလဲ၊ ထောက်လှန်းရေးကလိုလို တကယ်ရူးတာလာ? လိုလိုတွေးကြတာပါပဲ။ တွေးလည်း တွေးပါပဲ၊ သူလည်းသူ့ဘာသာနေ၊ ကိုယ်လဲ ကိုယ်အကြောင်းနဲ့မို့ဘယ်သူမှလဲ လိုက် ကြည့်နေမယ် မထင်ပါဘူလေ။
သူမကလည်း တစ်နေရာထဲ ထိုင်နေတာမျိုး မဟုပ်တော့ဘူး။ မြို့ လယ်ပိုင်းမှာ လျှောက်လိုက်၊ ဈေးရှေ့လမ်းမတလျှောက် တောင်ဘက်ခြမ်း သွားလိုက်၊ မြောက်ဘက်ခြမ်း သွားလိုက်။ ကြုံရာ တွေ့ရာထိုင်လိုက် လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်တာ၊ နေပုံ ထိုင်ပုံတွေကတော့ အတူတူပါပဲ ဘာမှပြောင်းလဲမူ မရှိပါဘူး။ သူမပြန်ပေါ်လာပြီ နောက်ပိုင်းလဲ ကျမတို့အဖို့ တော့ စိတ်နှောက်သူ နောက်တစ်ယောက်တိုး လာတာပဲပေါ့။ နေတာ၊ ထိုင်တာ ကတော့ တကယ့်ကို သတိချို့ ယွင်းနေလို့ သာ အမြင်မတော်၊ တော်ယိ ရော်ယိ နေထိုင်နေသူ လိုပါပဲ။ စား၊ သောက်နေတာမျိုးတော့ ကျမကပဲမတွေ့တာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ တခါမှကို မမြင်ဘူးဘူ။
နောက်တော့ ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ ဘယ်လိုပျောက်သွားတယ်လို့မသိရပါဘူး။ သူပျောက်သွားပြီး ၁၀-ရက်လောက် အကြာမှာ တိုင်းက စသုံးလုံးတွေ ကျမတို့ မြို့ ကို အုပ်စုလိုက်ဆင်းလာပါတယ်။ နယ်မြို့ မှာ လူစိမ်းတွေ ရောက်လာရင် မြို့ ခံတွေက သတိထားမိကြတတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ သူတို့အဖွဲ့ ကလည်း အုပ်စုလိုက် သွား၊ လာနေတာ ဆိုတော့ ပိုလည်း သတိထားမိတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ ဒီအဖွဲ့ထဲပါလာတော့ ကျမဆီ တစ်ရက်တော့ အလည်ရောက်လာပါတယ်။ သူတို့ က သူတို့အလုပ်နှင့်ဆိုတော့ တမင်လာတာတော့ မဟုပ်ပါဘူး။ ခရီးသွား ဟန်လွဲပဲ ဆိုပါတော့လေ။
မေးဘို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာ ရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကြုံတုံး ကိုယ်ကလဲ မေးလိုက်မိပါတယ်။ ဟဲ့ နင်တို့ဘာကိစ္စနှင့် ဒီမှာ ဒီလောက်လူအများကြီး ရောက်လာတာလဲလို့. . . . .။ ကျမမေးတော့ သူငယ်ချင်းက လိုတိုရှင်းပါပဲ သူတို့ဌါနအောက်က အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဒီမြို့ မှာ အသတ်ခံရလို့စစ်ဆေးဖို့နယ်ဆင်းလာတဲ့ အကြောင်းပါ။ တာဝန်မို့တခြားလဲထပ်မပြော၊ ကျမလဲ ထပ်မေးဘို့မကောင်းတော့ပါ။ ဘယ်လိုလူမျိုးနှင့် ပတ်သတ်တာ စုံစမ်းမိလို့အသတ်ခံလိုက်ရတယ်၊ စုံစမ်းခံရတဲ့သူကလည်း သိလို့လက်ဦးမူ့ယူလိုက်တာလားလဲ မသိရပါဘူး။
ဒီ မြို့ လယ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ရူးနေရောင်ဆောင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ကျမလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကလွဲလို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲလေ။ ကိုယ်ကကျောင်းသားပဲ ရှိသေးတာ။ အလုပ်ဆိုတာလဲ မသိ၊ အလုပ်ရဲ့ သဘောကိုတောင် သိသေးတာမှ မဟုပ်တာ။ စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့ ပညာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမယ့် အသက်အန္တရာယ် များပြားတာတော့ အမှန်ပဲလို့မျက်မြင်ကလေး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို နေရာဌါနမျိုးမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ စား၊ဝတ် နေမူ အဆင်ပြေစေဘို့စိတ်တစ်ခု အပြင် အလုပ်မှာ ကိုယ့်ဘဝ တစ်ခုလုံးကို ပေးဆပ်ထားရတဲ့ သဘောမျိုးလား? . . . တိုင်းပြည် နှင့် လူမျိုးကို တကယ်ပဲ ချစ်နိုင်မှ လုပ်နိုင်တာမျိုးလား ? သူတို့ တွေရဲ စိတ်ကူးကို ကျမလဲ မသိတော့ပါ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 12:43 AM
နောက်ကျောကို လက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့ အသံ ကြောင့် ဘေးခြင်း ကပ်ရပ် ထိုင်နေသော ဧည့်သည်က လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ရိုက်လိုက်တဲ့သူကတော့ ကလေး အမေ၊ ဧည့်သည်နှင့် ထောင့်ချိုးနေရာတွင် ထိုင်နေရာမှ လှမ်းတီးလိုက်တာပါ။ ဧည့်သည်ကလည်း စကားပြောနေရင်းမှ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားမှန်း မသိ၊ ကြောင်နေသည်။
ကလေးကလည်း မိခင် ဘာဖြစ်နေသည် မသိ။ သူပူဆာတာ မရလို့ဧည့်သည်ဘေးထိုင်၊ မျက်နှာလေး စာပွဲးပေါ်မှောက်လို့ဆူပုတ်၊ ဂျီကျနေသည်။ အမေဖြစ်သူက ဧည့်သည်လာလို့အခန်းထဲမှ ထွက်၊ ဘာမှ မဖြစ်သည့် မျက်နှာနှင့် ဧည့်ခံစကားပြောနေသည်။ ဧည့်သည်ကတော့ ဘာမှမသိ ခုမှရောက်ပြီး ဘာလို့ဒီဘက်လာတယ်၊ သူ့ ကိစ္စ သူသိတာ၊ စကားစပ်တာ ပြောနေသည်။ ကလေးကတော့ ဧည့်သည်ရှေ့ဆူဆူညံညံမဟုပ်ပဲ အသံတိတ် ဆန္ဒပြရာမှ မိခင်က စိတ်မရှည်တော့ပဲ လှမ်းတွယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးကတော့ ရိုက်ခံရတော့ `​အီး​` ခနည်း မြည်အောင် ငိုကြွေးတော့တာပေါ့။ ဧည့်သည်က မငိုဘို့ချော့ပေမယ့် မိခင်ကတော့ ထပ်တီးခြင်နေသည်။ သူမ၏ စိတ်ထွက်ပေါက်သည် ဒီကလေးပေါ်ရောက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အခန်းထဲးက မထွက်ခင် အကြီးမ ရည်းစားထားသည့် ကိစ္စကို ဆုံးမပြောဆိုခဲ့သည်။ အကြီးမ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ ​ရည်စားထားခြင်းသည် သမီး အခွင့်၊ အရေးပဲ​ ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် အကြီးမကို ​ဖြောင်း​ ခနဲ မည်အောင် ဆော်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဧည့်သည်လာသည် ဆိုသည့် အသံကြောင့် အပြင်ထွက် ဧည့်ခံနေတုံး နောက်တစ်ယောက်က လာဂျစ်တော့ စိတ်တိုတာတွေက ဧည့်သည်ရှေ့ဆုံးမလို့ ရသော ကလေးဆီရောက်သွားသည်။
ဧည့်သည်ရှေ့ဂျစ်တဲ့ အမှုဖြင့် ဧည့်သည်ပြန်သွားတော့ ကလေးကို တွေ့ ရာ တုတ်တစ်ချောင်းဖြင့် ထပ်တီးလိုက်သေးသည်။ မိခင်စိတ်ဖြင့် ကိုယ့်သမီးကို စာသင်ချိန်မှာ ရည်စားထားခြင်းကို မနှစ်သက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း ကောလိပ်ကျောင်းသူ ဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်မကြည်ဖြူနိုင်သူမို့ပိုလို့စိတ်တိုမိသည်။ သူတို့ဒုက္ခရောက်မည်ကို ဘယ်မိဘကများ ရူ့ စိမ့်ပါမည်နည်း။ ဒါပေမယ့် သား၊ သမီးများသည် မိဘစိတ်ကို သိသည်လား၊ မသိသည်လား မသိ။ ရည်းစားစိတ် တက်နေခြင်းသည် မိဘကို ပြန်ပြောရ၊ ဆန့်ကျင်ရမှာကိုပင် ရှက်ရမှန်း၊ ကြောက်ရမှန်း မသိအောင် မွန်ထူနေလေသည်။
ည အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် မိခင်ဖြစ်သူသည် အိပ်ရာဝင်ချိန်၊ မီးမှိတ်ပြီးသော် မျက်ရည်ကျလေသည်။ ရှိုပ်သံလေးများပင် ထွက်လေသည်။ မိခင်နှင့် အတူအိပ်ရသော အရိုက်ခံရသည့် ကလေးသည် မိခင်ငိုသံကို ကြားရ၏။ ဘာကြောင့် ငိုမှန်းကို တိတိကျကျ မသိပေ။ အရိုက်ခံရတာ၊ အရိုက်ခံရတာပင် မိခင်မျက်ရည်ကျနေသည်ကို သိတော့ စိတ်မကောင်းပေ။ မျက်ရည်လဲ သုတ်မပေးဝံ၊ မေးလည်း မမေးဝံပေ။ ကလေးများနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ၊ စီးပွှားရေး၊ လူမူရေးများကို ယောင်္ကျားများထက် မိန်းမတစ်ယောက် အနေဖြင့် ထမ်းနေရသဖြင့် မိခင်စိတ်သည် မအားလပ်နိုင်အောင် အလုပ်ရှုပ်ရပေသည်။ တခါ၊တရံတွင် ရှေးကစကာပုံ တစ်ခုသည်ပင် မှန်ပါ၏လော မေးခွန်းထုတ်မိသည်။ **မောင်တစ်ထမ်း၊ မယ်တစ်ရွက်** ဆိုးရိုးစကားသည် ဘယ်ခောတ်ဆီမှာ ရှိခဲ့ပါလိမ့်မလဲ။ သူမ အတွက်တော့ မဟုပ်။
တကယ်တော့လည်း ခင်ပွန်းသယ်သည် သောက်စား၊ ခိုး၊ ဆိုးနေသည် မဟုပ်ပါ။ အစိုးရ အရာရှိ (မြို့ မျက်နှာဖုံး အဆင့်) ရှိသူတစ်ဦးပင်။ ရသမျှလခ အကုန်အပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေးတွေနှင့် လူများသည့် အိမ်ထောင်စုကို ခုခေတ် တစစ တက်လာသော ဈေးနုန်းများဖြင့် တက္ကသိုလ်၊ အထက်တန်း နှင့် အလယ်တန်း အသီးသီးတို့ တွင် တက်နေသော ကျောင်းစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ကျူရှင်ခ၊ အခွန်၊အခ နှင့် သာရေး၊နာရေးတွေကို မလောက်ငနိုင်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရမှပေးသော ဝန်းထမ်းလစာမှလွဲပြီး၊ သူ့ သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းလေသည်။
ဒီကြားထဲ အကြီးဆုံးသမီး အိမ်ထောင်သည်ကလည်း၊ ခင်ပွန်းတာဝန်ကျရာ မလိုက်နိုင်ပဲ ဒီမြို့ က ဝန်ထမ်းအလုပ်နှင့် ကလေးတွေပါ အိမ်မှာ။ ဒါကတော့ အိမ်က သူ့ အောက် ညီမတွေက ကူထိန်းကျသည်။ မိသားစုများတော့ အကြောင်းကြီး၊ ငယ်တွေ ရန်ပွဲးတွေကလည်း ရှင်းရသေးသည်။ ခုလည်း နောက်တစ်ယောက် သဘောမတူသူနှင့် ရည်ငံနေသည်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ သူယူလို့သူ့ ဒုက္ခ၊ သူခံလိပ်မည်လို တွေးလိုမရပါ။ ကိုယ်က မိခင် သမီးဖြစ်သူ တစ်စုံ၊တစ်ခု ဖြစ်လျှင် ကိုယ်ပင် ရင်ကွဲးရမည်။ ပြင်နိုင်တုံး ပြင်စေခြင်သည်။ ဒါပေမယ့် သမီးက နားမလည်း၊ ချစ်စိတ်မွန်နေသည်။ ပြီလျှင် သူ့ ဒုက္ခသည် ကိုယ့်ဒုက္ခဖြစ်လာမည်။ အငယ်တွေက တစ်ဖက်နှင့် မိခင်ဖြစ်သော သူမ ငိုမိလေသည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 7:02 PM
ကျမတို့မြို့ က ဝါဆိုပွဲး
ကျမတို့ မြို့ က ဓလေ့လေး တစ်ခုအကြောင်း ပြောခြင်စိတ်ပေါ်နေပါတယ်။ တခြား အရပ်ဒေသတွေ မှာတော့ ဒီဓလေ့ ရှိ၊ မရှိ မသိပါဘူး။ လာမယ့်နေ့ လေးက ဝါဆိုလပြည့်နေ့ လေးမို့ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးရင်ကောင်း မလားလို့စိတ်ကူးရလာပါတယ်။ အလှူဒါနကို လူဖြစ်စေ၊ ဘုန်းကြီးဖြစ်စေ ပြုတတ်ကြတာ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တွေ အမှတ်လက္ခာထဲက တစ်ခုပါ။ တခြားဘာသာတွေမှာလဲ သူတို့ နည်းနှင့် သူတို့လှူပုံလေးတွေ ရှိတယ်လို့ တော့ သိပါတယ်။ သေသေခြာခြာတော့ မလေ့လာဘူးသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဗုဓ္ဒဘာသာ ဘုန်းဘုန်းတွေဟာတော့ အမြဲ အလှူခံနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဟုပ်ကြပါဘူး။ :D ဆိုလိုခြင်တာက တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်အလှူခံရထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည် ဒါနပြူတတ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေ အများကြီးပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဘုန်းကြီးဆိုတာ ပိုလျှံနေတဲ့ ပစ္စည်းကို (ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိနည်းအရ) ဆားလေး တစ်ဆုတ်ကအစ မသိမ်းရပါဘူး။ ပစ္စည်းအတွက် ကြောင့်ကြပြီး တရားသားမတက်မှာ စိုးလို့ ပါ။ ခုခောတ်တော့ တရားထိုင်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေထက် ၊ စာချတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေ၊ စာသင်သားတွေ ကလည်းများလှတာမို့အပ်စပ်အောင် ကပ်ပိယထားလို့စီစဉ်စေရပါတယ်။
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်ကပင် အရှင်သာရိပုတရာ ကိုယ်တော်မြတ် ရဟန်တော် တပါး လေနာထ ပြီး ဆွမ်းခံမကြွနိုင်တာကြာင့် ယခင် လေနာထခဲ့စဉ်က မည့်သည့်အရာကို ဘုန်းပေးပြီး လေနာပြောက်ခဲ့ ဘူးကြောင်း မေးမြန်ရာ ယာဂုဆွမ်းဖြင့် ပျောက်ကင်းဘူးကြောင်း ပြန်လည် လျှောက်ထားသဖြင့် ယာဂုဆွမ်းကို ရှာဖွေကာ ခံယူလို့ကျွေးလှူခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဂီလာနရဟန်းတော်ကို လုပ်ကျွေးပြုစုရာလည်းရောက် ဆွမ်းလည်း လှူဒါန်း ပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါဆိုလပြည့်နေ့ သည် ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တို့ ၏ အခါကြီး၊ ရက်ကြီး နေ့ ထူး၊ နေ့ မြတ် ဖြစ်သည့် အလျှောက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဝါဆိုသင်္ဃာန်း၊ ဆွမ်း၊ ကွမ်း၊ ဆေး နှင့် တခြား လှူဖွယ်မျိုးစုံကို ကပ်လှူပူဆော်လေ့ ရှိကြပေသည်။ တစ်နေ့ တာ ကာလ တရားနာယူ၊ ဥပုတ်သီတင်း စောင့်သူများပြားလှသည်။ ကိုယ့်မြို့ ၊ ရွာရှိ စေတီပုထိုး များသို့သွားရောက်ပြီး ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီးမီးပူဇော်ခြင်း တံမျက်စည်းလှည်း ကုသိုလ် စသည်ဖြင့် ဝေရာဝတ်စ ကုသိုလ်ယူသူများလည်း ပေါများလှပေသည်။
ကျမတို့ ကိုးကွယ်သော ဗုဓ္ဒဘာသာ ရဟန်းတော်များသည် ဝါတွင်း ၃-လ ဝါဆို၊ ဝါကပ်နိုင်ရန် ဝါဆို လပြည့်ကျော် ၁-ရက်တွင် ဝါစဉ် ကြီး၊ ငယ် အလိုက် ကန်တော့ ဝါကပ်ရသည်ကို ငယ်စဉ်က မြင်ခဲ့ရဘူးပါသည်။ ကျမတို့အရပ်ဒေသမှာ ဝါကပ်မည့်ရက်တွင် ဝါဆိုပန်းများဖြင့် ဘုန်တော်ကြီးများ သတင်သုံးရာ အရပ်များသို့လှူဒါန်းမည့်သူများ လာရောက်ဖူးမျှော်သူများ ဘုရားတဝိုက်နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း တဝိုက်တို့ တွင် ပြည့်နှက်လျှက် နေလေသည်။ ကျမတို့အိမ်ရှေ့မင်းလမ်းမတွင် ဝါကပ်ပွဲးကို ပန်းလှူရန်၊ ပန်းလှူရန် လာသူများကို အအေး၊ ဂျင်းသီးသန့် သုတ်များ ကျွေးမွေးရန် အလှူရှင်များ၊ ကာလသားများနှင့် ပြည့်လျှံ နေတတ်သည်မှာ နှစ်စဉ်၊ နှစ်တိုင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် ကျမတို့ မြို့ မှာ ဝါဆိုရက်တွင် လူများက လှူတန်းကြသလို၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁-ရက်တွင် ရဟန်းတော်များက မိမိတို့ဆွမ်းခံအိမ် နှင့် သိကျွမ်းသူ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမတို့ အား ဝါမကပ်မှီ ညနေခင်း ၃၊ ၄-နာရီလောက်မှ စ၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းတွင် ဝါဆိုပန်းလှူသူရော၊ ဝါကပ်လာရောက် ကြည်ညို ကြသူများကိုလည်း မိမိတို့ ဆိုင်ရာ၊ ဆိုင်ရာ ကိုယ်တော်များက ဆန်ဆနွမ်းမကင်း၊ ငှက်ပျော(သို့ ) အာလူး ဆနွမ်းမကင်း၊ လဖက်၊ဂျင်သုတ် အအေး၊ ဖာလူဒါ၊ ရွှေရင်အေး၊ သာကူကြို၊ အသီးအနှံများ စသည်ဖြင့် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံ လှူဒန်းလေ့ ရှိတဲ့ ဓလေ့လေးပါပဲ။ ဒီလိုကျွေးမွှေး လှူဒါန်းတာဟာ ကျောင်း တစ်ကျောင်းထဲကတင် မဟုပ်ပါဘူး။ ကျမတို့မြို့ မှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းတိုင်း၊ ကျောင်းတိုင်းကပါပဲ။
တခြားအရပ်ဒေသမှာ ဒီဓလေ့ကို မတွေ့ ဘူးပါဘူ။ ဝါဆို၊ဝါကပ် ကြည်ညိုသူတွေကို လူတွေအခြင်းခြင်း ကျွေမွေးလှူဒါန်းသူ အလှူရှင် တွေကတော့ အရပ်ဒေသတိုင်းမှာ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကတော့ ကျမတို့မြို့ က ဘုန်းဘုန်းတွေက ပြန်လည် ကျွေးမွေး လှူဒါန်းတဲ့ အချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်သင်္ဃာတွေမို့လှူနိုင်လောက်တဲ့ ဝတ္ထူ ပစ္စည်း မလုံလောက်ရင်တောင် ဘုန်းဘုန်းရဲ့မိဘ၊ မွေးချင်းများက ဝါကပ်မဲ့ ရက်မှာ လာရောက် ကူညီပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျမတို့ မြို့ သူ၊ မြို့ သားတွေကတော့ တစ်နှစ်လုံး ဘုန်းဘုန်းတို့ ရဲ့ ဆွမ်း၊ကွမ်း ကပ်လှူကြပေမယ့်၊ ယခုလို ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁-ရက်မှာ ဘုန်းဘုန်းတို့ပြုတဲ့ ဒီအလှူကို သွားရောက် စားရတာ၊ ဝါကပ်မူ့ ကို ကြည်ညိုရတာဟာ ယခုတိုင် မြို့ လေးရဲ့ အလေ့အထလေး တစ်ခု ဖြစ်နေဆဲ ပါပဲရှင်။
၃၈-ဖြာ မင်္ဂလာ ကဗျာ (ငယ်ငယ်က ရွတ်ခဲ့ဘူးသော ကဗျာလေး ကူယူဖော်ပြပါသည်။)
၁။ လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွှဲလို့ ၊ မမှီဝဲနှင့် ကင်းအောင်နေ။
ပညာရှိကို အရှည်တွဲလို့ ၊ မှီဝဲဆည်းကပ် နည်းယူစေ။
သုံးပါးရတနာ မိဘများနှင့်၊ ဆရာသမားကို ပူဇော်လေ။
ချမ်းသာကိုပေး ဆက်ဆံရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ။
အဲဒါမှ *ဗုဓ္ဒဝါဒ * ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၂။ ကုသိုလ် ပညာ ဥစ္စာရဖို့ ၊ သင့်ရာဒေသ အမြဲနေ။
ရှေးကတင်ကြို ပြုခဲ့ဖူးသည့်၊ ကောင်းမူ အထူး ရှိပါစေ။
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ထိန်းလို့ ၊ မတိမ်းစေနဲ့ဆောက်တည်လေ။
ဥစ္စာကိုပေး နေထိုင်ရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ။
၃။ တတ်ကောင်းတတ်ရာ ဟူသမျှကို၊ ကြားမြင်သုတ ရှိပါစေ။
အိုးအိမ်တည်ထောင် ဝမ်းစာရေးနဲ့ ၊ အသက်မွေးဖို့အတတ်သင်လေ။
လူနှင့် ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို၊ ကောင်းစွာသင်ကြား နားလည်စေ။
မှန်ကန်ယဉ်ကျေး ချိုသာအေး၊ ဆိုရေးတတ်ပါစေ။
၄။ မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် မိဘကြွေးကို၊ ကောင်းစွာဆပ်ပေး ဝတ်ကျေကျေ။
ကြွေးသစ်ချကာ သားနှင့် မယား၊ မြှောက်စားချီးမြှင့် ဝတ်ကုန်ပေး။
အလုပ်တာဝန် မလစ်ဟင်းနဲ့ ၊ အပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ပါလေ။
စည်းစိမ်ကိုပေး ပြုစုရေး မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ။
၅။ သုံးတန် စေတနာ ဖြူစင်လွန်းလို့ ၊ ပေးကမ်းဝေမျှ လှူနိုင်စေ။
ကိုယ်နုတ် စိတ်ကြံ မမိုက်မှားနဲ့ ၊ သုစရိုက်တရား ကျင့်ပါလေ။
ဆွေးမျိုးတွေကို ပစ်မထားနဲ့ ၊ သင်္ဂဟတရားနဲ့ချီးမြှောက်လေ။
သန့် စင်ပြစ်မျိုး လူထုအကျိုး၊ သယ်ပိုးဆောင်ရွက်စေ။
၆။ မကောင်းမူတွေ ဟူသမျှကို၊ မတွေ့ ခင်က ရှောင်ကြဉ်လေ။
တွေ့ ကြုံလာလျှင် မလွန်ကျူးနဲ့ ၊ အထူးသဖြင့် စောင့်စည်းနေ။
အရက်သေစာ မသောက်စားနဲ့ ၊ မှောက်မှားတတ်တဲ့ အရာပေ။
လုပ်ကိုင်ပြောကြား သတိထား၊ တရားမမေ့စေ။
၇။ အသက်ဂုဏ်ဝါ ကိုယ့်ထက်ကြီးက၊ ဆည်းကပ်ခစား ရိုသေလေ။
(ဂုဏ်ဝါ = သီလ၊ သိက္ခာ)
မာနတံခွန် ဂုဏ်မကြွနဲ့ ၊ ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချ အမြဲနေ။
လောဘအပို လိုမလိုက်နဲ့ ၊ ကိုယ်ထိုက်တာနဲ့ကျေနပ်လေ။
(ကံမှလွှဲ၍၊ ဥာဏ်၊ လုံးလ၊ ဝီရိယ ဖြင့် မကျိုးစာတာကို မဆိုပါ)
ကိုယ့်ပေါ်ပြုဖူး သူ့ ကျေးဇူး၊ အထူးသိတတ်စေ။
(ကိုယ့်ကျေးဇူ ဆပ်ရန်အတွက်၊ အခြား သူတပါးကို အကျိုးမဲ့ မပြူသင့်။)
ကောင်းကျိုးဆင့်ပွှား မြတ်တရား၊ နာကြား မပြတ်စေ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 11:12 PM
` ရ` ရထားကြီး ပျော်ပျော်စီး
ပုံလေးကိုတော့ Google ကနေ ရှာထည့်ပေးတာပါ။
ခရီးလေးတစ်ခု အကြောင်းဆီ စိတ်အာရုံကလေးက ကျက်စားလို့နေပြန်သည်။ ခရီးဆိုသော်လည်း ကိုယ်မရောက်ဘူးသော အရပ်ဒေသများသို့သွားရသည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လား မသိပါ မမြင်ဘူး၊ မတွေ့ဘူးသော အရပ်ဒေသများ၊ မြင်ကွင်းများ နှင့် အတွေ့ အကြုံများကြားမှ သွားရသောကြောင့် ထင်ပါရဲ့ယခင်ကဆိုလျှင် ငြီးငွေ့ မိမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ယခုအခါတွင်တော့ ကိုယ့်အရပ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့စကားသံကို မညီးငြူနိုင်အားပါပဲ ခရီစဉ်များကို စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ၊ လွမ်းမောတသစွာ သွားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး နှစ်နှစ်ခွဲး၊ သုံးနှစ်ကြာမှ သွားဖြစ်သော ဆွေပြ၊ မျိုးပြ ခရီးစဉ်လေးတစ်ခုတွင် လမ်းခုလတ်မှာ ကြုံတွေ့ ရသော ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို နတ်သံမနှောပဲ အစချီလိုက် ခြင်ပါတယ်နော်။
ကျမ ခင်ပွန်းရဲ့မိဘ၊ မောင်ဘွား နှင့် ဆွေမျိုးများရှိရာဆီ မပြန်တာကြာပြီဖြစ်သော ခင်ပွန်သည်နှင့် အတူ လိုက်ပါရင်း ခရီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ကျမ ကလည်း ခရီးသွားရတာ တာဝန်မပါတာမို့ပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးစဉ်က မန္တလေးမှ ထိုအရပ်ဒေသ ကျွန်းလှ ဆိုတဲ့မြို့ ပြနဲ့အလှမ်းဝေးသော၊ တောင်ပေါ်လိုလို တောင်ကြားလိုလို အရပ် အထက်အညာ ဒေသကလေးဆီပါ။ အဲဒီကို အသွားခရီးက မထောင်းတာလှပဲ အပြန်ခရီးတွင် ထိုအရပ်ဒေသသားတို့ ရဲ့ သွားရေး၊ လာရေး ခက်ခဲးပုံများနှင့် ကြုံတွေ့ရရုံသာ မက ခရီးသွားတို့ကြား ကြုံစုံရသော အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖြင့် အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
အသွားခရီးသည် မန္တလေးမှ နေ့ လည် ၃း၃၀ နာရီတွင် စထွက်ပြီး၊ ည ၉း၃၀နာရီ၊ ၁၀နာရီလောက်တွင် သွားရမည့် နေရာသို့ ရောက်သောကြောင့် ခရီးလမ်းတွင် အခေါက်တစ်ရာလောက် လူတိုင်းကို ဘာစားမလဲ၊ ဘာမှာမလဲမေးမြန် နှောက်ယှက်သော ရထားမှ အမှူထမ်းတို့ ၏ တာဝန်ပိုလွန်းမူ၊ သုံးခါထပ်မနည်း စစ်ဆေးသော လတ်မှတ်စစ်တို့ ၏ ဝတ်တရားသိတတ်မူနှင့် ပိုက်ဆံပေးတင်လာသော အထက်တန်းတွဲမှ ကုန်စည် စလွယ်များကြောင့် အိမ်သာပင် တတ်မရအောင် ပစ္စည်းတွေကြပ်၊ ကြမ်းပြင်မှာ ပြားနေအောင် ဆင်းအိမ်သော လူတွေမှလွဲး၍ တခြားစိတ်ရူတ်ဖွယ် အထူးအထွေ မတွေ့ ရပေ။ :D(ကျမတို့ချစ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ . . .တကယ်ပါ မညာပါဘူး။)
သူ့ မိဘတွေ့ နှင့်တွေ့ဒါတွေကတော့ ထုံးစံပေါ့နော်။ ကိုကလည်း အတူနေတာမှ မဟုပ်တာ ဧည့်သည်၊ အိမ်သည်သဘောမျိုး ဖြစ်နေတာကိုး။ ရောက်တုံးမှာ သူတို့ မိသားစုဝင်တွေ တခါမှ စုံတယ်မရှိဘူး၊ ခုလို စုံတုံး အလှူအတန်းတွေလုပ်ပေါ့။ သူ့ တို့ အမျိုးကလည်း များ၊ လူကလည်းတက်ညီ၊ လက်ညီနှင့် ကူကြ၊ ဝိုင်းကြ ဆိုတော့ အလှူပွဲးလေးဟာ အောင်အောင်မြင်မြင်နှင့် ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ သူတို့ မြို့ ဟောင်းလေး ရေးမြုတ် ဧရိယာလေးထဲ ပါသွားတဲ့ သဖန်းဆိတ်ဆိုတာကြီးနှင့် ကင်းတား ရေတားစီမံကိန်းတွေကို အလည်သဘော လိုက်ပို့ ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဘာညာ၊ သာတကာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နေရမယ် အချိန်ကာလတစ်ခု ပြည့်လာတော့ အပြန်ခရီးစဉ် စဖို့စီစဉ်ရတာပေါ့လေ။ သူ့ ဖေဖေ၊ ကျမ ယောက်ခမကြီးက ဆိုရင် သူ့ သားတွေ၊ သူရင်ခွင်ကနေ ခွဲးပြီး ပြန်တော့မယ် ဆိုပြီ၊ နှစ်ရက်၊ သုံးရက် အလိုကတည်းက မျက်နှာလည်းမကောင်း၊ ကောင်းကောင်းလည်း မစား ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ (ဒါတောင် ခုမှ ခွဲးရတာ မဟုပ်ပါဘူး၊ သူ့သားတွေနှင့် ခွဲးခဲ့ရတာ ဆယ်စုကိုတောင် ခုဂဏန်းတွေ စွန်းခဲ့ပါပြီ။)
ကျမကတော့ ကိုယ့်ရပ်ဌါနေ ပြန်ရ၊ သွားရတော့မှာ ဆိုတော့ တက်ကြွခြင် သလိုလိုပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ရထားလက်မှတ်ကလည်း ဒီလို မြို့ လေးအတွက် အထက်တန်းတွဲးက (၄)နေရာပဲ ခွဲးတန်းရပါတယ်။ ကျမတို့ပြန်မယ့်သူက (၄+၁) ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်စာကတော့ အပိုကြေးပေးပြီ ကိုယ့်ဘာသာ အဆင်ပြေသလို လိုက်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့ (၄)ယောက်စာကို လုံးပန်းကြရတယ်။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကျမတို့ပြန်မယ့်ရက်မှာပဲ မန္တလေး တက္ကသိုလ်က ဆရာမ (၆)ယောက်ဟာလည်း အထက်တန်းတွဲးကို ဖြတ်ဘို့ကြိုးစားနေလို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ မှာလည်း ခွင့်ရက်နဲ့ကိုက်ပြန်ရတာမို့မီးရထားရုံးမှာ လက်မှတ်ရဘို့ဝယ်ပေးသူတွေက အတော်ကြိုးစား ရပါတယ်။ သူတို့ က (၁၀)တန်း စာမေးပွဲးအမှီ ဒီမြို့ ကလေးက ကျောင်းသားလေးတွေကို အနီးကပ် လုပ်အားပေး၊ စာလာသင်ပေးကြတာ ဆိုတော့ ဝန်းထမ်းကလည်း ဟိုလူ့ပေးရနိုး၊ ဒီလူ့ ပေးရနိုး ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။
အင်း ကျွန်းလှမြို့ က ပြန်ရမယ့်ညပေါ့ ၊ ဟုပ်တယ်လေ အပြန်က မြစ်ကြီးနားက ထွက်လာမယ့် ရထားက သန်းခေါင်သနွဲးမှ ဝင်မလားမသိ၊ ကိုယ်လဲ တစ်ခါမှ မပြန်ဘူးပဲကိုး။ စောစော အိပ်နေကြ မဟုပ်လို အိပ်လို့ လဲ မရပါဘူ။ မနိုးမှာလဲစိုးတော့ အအိပ်ကလည်း ဆတ်နေပြန်ရော။ မအိပ် အိပ်ရသေးဘူး မနက် (၃)နာရီ ပြန်ထရ ပြန်ပါရော။ သူ့မေမေနှင့် မောင်နှမ တစ်တွေကတော့ လှုပ်စိ၊ လှုပ်စိနှင့် ပြန်ဘို့ ပြင်သူက ပြင်၊ လိုက်ပို့ မယ့်သူ့ က လိုက်ပို့ ဘို့ ပြင်နဲ့ ပါပဲ။ သူ့ ဖေဖေကတော့ နိုးနေပေမယ့် မလှုပ်ပဲ၊ အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေပါတယ်။ သူ့ က မခွဲးခြင်သူကိုး မိဘတွေလည်း သနားမိပါရဲ့ ၊ ကိုယ့်ကိုလည်း သနားမိပါတယ်။ နေခြင်ပေမယ့်၊ တော်ရာမှ နေရတဲ့ဘဝ၊ ပျော်တယ်ရယ် မဟုပ်သော်လည်း၊ နေတတ်အောင် နေရတဲ့ဘဝတွေ မို့ လား။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာတာ သေသေချာချာများ စဉ်စားကြည့်မိရင် သုခဆိုတာထက်၊ ဒုက္ခတွေက များလှပါတယ်။ သံဝေဂတွေ ခဏထားလို့အကြောင်းအရာလေးကို ဆက်လိုက်ကြအုံးစို့ နော်။
ခရီးသွားခါနီး ဘုရားကို အရင်ရှစ်ခိုးရပါတယ်။ ပြီးရင် အိမ်ကမထွက်ခင် မိဘ၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်လေး၊ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူကို ကန်တော့လေ့ ရှိတဲ့ ကျမတို့မိသားစုရဲ့အလေ့အတိုင်း ယေက္ခမကြီးတွေကိုလည်း လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုးလို့ကန့် တော့ခဲ့ပါသေးတယ်။ မိဘတွေက ခရီးမှာ ခလုတ်မထိ၊ ဆူးမငြိအောင်လို့တဲ့။ ကျမတို့ညီအမ တစ်တွေ အမြဲကန်တော့ပြီ်းမှ ခရီးသွားရပါတယ်။ ဘယ်သူမှမရှိရင်တော့ ဘုရားကိုပဲ ဦးချပြီး ခရီးထွက်ရပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သရဏဂုံတင်ပြီး ခရီးသွားရတဲ့ အလေ့အထလေးပေါ့။ ချစ်စရာ မြန်မာဓလေ့လေးမို့မြတ်နိုးစရာလေး မဟုပ်ပါလား။ မိဘတွေ ကိုယ့်ဆီ လာလည်တော့လည်း မပြန်ခင်မှာ မိဘတွေကို ကန်တော့လိုက်ကြမြဲပါပဲရှင်။
ဇာတ်လမ်းလေးက စတည်းက ယာဉ်သကိုးရှင့်။ ကျမတို့(၃)နာရီလောက်က ထပြီး၊ ပြန်ဘို့တရုန်းရုန်းလုပ်ပြီး၊ ၃-နာရီ ခွဲး အိမ်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၄-နာရီလောက်ကတည်းက စပြီးစောင့်လိုက်ရတဲ့ ရထား လည်ပင်ကို ညောင်ရေအိုး ဖြစ်လောက်တယ်။ ဆောင်းတွင်းအအေးဟာ ဝတ်ထားတဲ့ အနွေးထည်ကိုတောင် ထီမထင်ပဲ ဖောက်ဝင်လာနေတာမို့ရထားဘူတာရုံလို လဟာပြင်မှာ သွေပူအောင် ထပြီး ဟိုလျှောက်လျှောက်၊ ဒီလျှောက်လျှောက်နဲ့အိပ်ခြင်သလို မျက်လုံး အစုံကလည်း မျက်ရည်တွေ ဝေ့ဝေ့လာလို သုတ်ရသေး။ ရထားကလည်း ရိုးရိုး သူတို့ အခေါ်နဘားတွဲးတွေတော့ လာပါရဲ့ ၊ ကိုယ်စီးမယ့် အထူးရထားက မလားသေးနဲ့ ပေါ့လေ။
ဟော လာမယ့် လာတော့ (၅)နာရီ ထိုးလုလုမှ ပေါ်လာတယ်။ ကိုယ်စီးရမယ့်တွဲးကို သူတို့ တွေက နယ်ခံဆိုတော့ သိကြတယ်၊ ရှာပေးကြပါတယ်။ မီးရထားက ရပ်တာမှ ၅-မိနစ်၊ ၁၀-မိနစ် တွဲးရှာ အဲ ရိုးရိုးတောင် ရှာရတာ မဟုပ်ဘူး။ အပြန်သယ်မယ့် ပစ္စည်း၊ ခြင်းတွေ အိတ်တွေ ဆွဲးပြီး ပြေးပြေးလွှားလွှား ရှာရတာ။ တွေ့ တော့ နောက်ဆုံးတွဲမှာ အထူးတန်း-၂။ ရထားနောက်ဆုံးတွဲး ဖြစ်နေတဲ့ အထူးတန်း ဆိုတာကြီးဆီ သူတို့ တွေသယ်ပို့ ပေးလို့ သာ လူစုံ၊ ပစ္စည်းစုံ ရောက်ပြီး ပါလာပါတယ်။ ပစ္စည်းက နေရာမှ မကျသေး ရထားက ဥဩစွဲးလို့စထွက်ပြီ။ ကျမတို့ မြို့ က မီးရထား မရှိဘူးတဲ့ အရပ်၊ ဘယ်သွားသွား ကားပဲစီသွားရတာ ဆိုတော့ ကားစီးရတဲ့ ဒုက္ခတော့ သိပေမယ့်၊ ရထားစီးရတဲ့ ဒုက္ခကတော့ ဒါ ပွဲးဦးထွက်လောက်နီးနီးပေါ့လေ။
ရထားစီးဘူးသူတွေ အတွက်ကတော့ နောက်ဆုံးတွဲးစီးရတဲ့ အရသာကို ကောင်းကောင်း သိထားပြီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အထူးအမြန် ရထားလဲ ဖြစ်နေတော့ တွေးရုံနှင့်တင် မြင်ရောင်မိမှာပါ။ ရထားကလည်းထွက်၊ ကျမ အမျိုးသားနှင့် သူ့ အစ်ကိုကလည်း ပစ္စည်းတွေ စင်တွေပေါ်တင်၊ ခုံတွေအောက်ထဲ့ နဲ့ ရထားပေါ်ပါလာကြပါတယ်။ အို ဘာပြောကောင်းမလဲ ရထားလမ်း အကွေ့အကောက်တွေ များတာ ခုတစ်ခေါက်မှပဲ သိရပါတော့တယ်။ ရထားက တစ်ခါ၊ တစ်ခါများ ကွေ့လိုက်ရင်း တွဲးကြီးက ၆၀ ဒီဂရီလောက် ရှိမယ် ဟိုဘက်ယိမ်းလိုက်၊ ဒီဘက် ရမ်းလိုက်နဲ့ပစ္စည်းတွေများ ပြုတ်ပျက် ကျလာမတတ်ပဲ။ ကျမတို့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ လပ်ကေ့စ် အသေးတလုံးပါလာတယ်။ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေက သူဟာနှင့်သူ အထားကျနေပေမယ့်၊ ဒီလပ်ကေ့စ် အသေးလေးက တွဲးကရမ်းသွားရင် တစ်ခါထွက်လာလိုက်၊ ပြုတ်ကျတော့မလို ဖြစ်လို့ခုံပေါ်မတ်တပ်ရပ်ပြီ ထိန်းလိုက်ရတာလည်း အမော။ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါလည်း မဟုပ်ဘူး လေး၊ ငါး ခါလောက်လဲ အပြေးတက်ထိန်းပြီးရော ကျမလည်း အိပ်ကလည်း အိပ်ချင်၊ စိတ်ကလည်း မရှည်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့မသိခြင်ယောင် ဆောင်ပြီ အိပ်မလို့ ပဲ ရှိသေးတယ် “ဝုန်း“ ခနဲး မည်သံနှင့် အတူ လက်ကေ့စ် အသေးလေးအောက်ကို ပြုတ်ကျလာပါရောလား။
အိတ်က ရိုးရိုးကျတာ မဟုပ်ဘူးလေ၊ ခုံရဲ့စင်္ကြန်လမ်းဘက်ခြမ်းက ဦးပဇင်းတပါး ထိုင်လိုက်လာတာကို ဘုန်းကြီး ခေါင်းပေါ်“ဒုန်း“ ခနဲ မည်အောင် ပြုတ်ကျသွားတာပါပဲ။ ကျမနှင့် ကျမ ယောက်ကျားလည်း ဘုန်းကြီးကို အာနာပြီး မြန်မြန် ကောက်ထားလိုက်ရတယ်။ အပေါ်မတင်တော့ပဲ ခုံဘေး ကပ်ထား လိုက်ရတော့ တာပေါ့။ တော်နေကြာတော့ ဘုန်းတော်ကြီးက သူ့ ဘေးမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်းအကျိုးလေး ကောက်ပြီး ပြန်ပေးတယ်၊ ဘာမှ မဖြစ်သလိုပဲ။ သံဃာမှန်း သိသော်လည်း ခရီးသွားနေစဉ်မို့ကိုယ့်ဒုက္ခနှင့်ကို ဘာမှလည်း သီးသန့် ဖယ်ပြီ အရိုအသေပေးလို့မရနိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ကိုကလည်း ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေနှင့် အထာကျမလို ရှိသေး လက်မှတ်စစ်ကလာလို့လက်မှတ်ပြရသေးတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကျမတို့ နှင့် လက်မှတ်ဝယ်ဘို့ကြိုးစားကြတဲ့ ဆရာမတွေကလည်း ကျမတို့ရထားပေါ်မှာ ပါလာပါတယ်။ မြို့ ခွဲးတန်းကမှ ၄-ခုံပဲ ရတာ။ ရထားပေါ်တက်တုံးက စုပြုံတိုးတက်လာတာ အားလုံးစုစုပေါင်း ဆယ့်နှစ်ဦး၊ ဆယ့်သုံးဦးလောက်တော့ ရှိပါမယ်။
ကျမတို့ က ၅-ယောက် ဒါပေမယ့် ၁-ယောက်စာတော့ ကြိုပေးထားတာမို့လက်မှတ်စစ်ကဘာမှ မပြောပါဘူး။ ဆရာမတွေ လက်မှတ်စစ်တော့ ၄-ယောက်က အထက်တန်းတွဲး၊ ၂-ယောက်က ရိုးရိုးတွဲးပါ ဆိုပြီ ယစ်ပါလေရော။ လက်မှတ်စစ်ကလည်း ပိုက်ဆံလိုခြင်လို တော်ကြာလာလိုက် တမျိုးပြောလိုက်၊ တော်ကြာ လာပြန်ရင်း လက်မှတ်စစ်ကို ထပ်စစ်မဲ့စစ်ဆေးရေးတွေ လာရင် ဘယ်လိုပြောရမလဲနှင့် လာညစ် နေတာပေါ့လေ။ ဆရာမတွေကလည်း ဝန်းထမ်းတွေလေ ဘယ်ပေးခြင်မလဲ။ ဘုနှင့် ဘောက်ပေါ့။ လမ်းခရီး တော်တော်ပေါက်မှ ဆိုတော့ ခုတော့ မပြောင်းပါရစေနှင့်ပေါ့။ ရွှေဘို ရောက်ရင်တော့ ရိုးရိုးတွဲးကို သွားပါ့မယ်ဆိုပြီး ၃-ယောက် တစ်ခုံတန်းနဲ့ထိုင်လိုက်လာပါတယ်။ ဆရာမ တစ်ယောက်က တော်တော် `ဝ`ပါတယ်။ သူတို့ ထိုင်လိုက်တော့ ရတော့သွားတာပါပဲ။
နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ပေးမှာ မဟုပ်ဘူး၊ ဆရာမတွေကလည်း တာဝန်နဲ့ လာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဆိုတာ သိသွားတော့(ဆရာမတွေက ဝန်းထမ်းကဒ်တွေ ထုတ်ပြပြီ ပြန်စွာလိုက်တာ) ရွှေဘိုရောက်ရင်တော့ တွဲးပြောင်းပါဆိုပြီး ပြန်သွားတယ်။ :D လက်မှတ်စစ် ထွက်သွားတော့မှ ` လား လား` ဆရာမတွေက သူတို့ ခြင်းပြောပြီး ရယ်ကျပါရော။ ဆရာမတွေကလည်း ဒီရက်ပဲ ရအောင်ပြန်လာမယ် ဆိုပြီး ဖြစ်အောင် စီစဉ်တယ် ထင်ပါရဲ့ ။ ဖြစ်ပုံက အထက်တန်းတွဲး လက်မှတ်တွေက လာတုံးက လက်မှတ်တွေ၊ ရိုးရိုးတန်း လက်မှတ်ကမှ အပြန် အတွက် ဝယ်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကလည်း ရိုးရိုးတန်းမှာ မစီးခြင်တော့ အထက်တန်းတွဲးလက်မှတ် အဟောင်းနှင့် တွဲးပြီး ရအောင် တက်စီးလာတာ။ ရိုးရိုးတန်း လက်မှတ် နှစ်စောင် ဝယ်ထားတဲ့ ဆရာမ ၂-ယောက်က ရွှေဘိုထိပဲ လိုက်မှာ။ အဲဒီတော့ ပြောင်းခိုင်းတဲ့ အချိန်ကြ သူတို့ မြို့ ရောက်ပြီ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆရာမများကလည်း မန္တလေးထိ စီးလိုရသွားပါတယ်။
ကျန်တဲ့ လူ ၂-ယောက်ကတော့ တွဲးစောင့်ကို ဒဏ်ကြေးပေးလိုက်ရပြီ(သူတို့ က အဲလို လက်မှတ် အဟောင်လေးမှ မပြနိုင်ပဲကိုး) နောက်ဘူတာရောက်တော့ ရိုးရိုးတွဲး ပြောင်းသွားရပါတယ်။ ကိစ္စလေးပြီးသလို ဖြစ်သွားတော့ ကျမလဲ အိပ်မလိုလိုပဲ ရှိသေး ရွှေဘိုမြို့ ဝင်လာပါတယ်။ မိုးလဲ လင်းလုလုဆိုတော့ ရွှေဘိုမှာလည်း ရထားရှန်တိန်လုပ်ရမှာ ဆိုတော့ အကြော်၊ ထမင်းကြော် ၊ ပြောင်းဖူး စတာလေးတွေ ဆင်းဝယ်စား အဲ အဲ မျက်နှာအရင်သစ် ပြီးမှ ဝယ်စားကြပါတယ် :P ။ မိနစ် နှစ်ဆယ်၊ နာရီဝက်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီကနေ ရှန်တိန်လုပ်ရမယ့် တွဲးတွေလာပြီးမှ ကျမတို့စီးလာတဲ့ ရထားတွဲးကြီးဟာလည်း ခရီးဆက်လက် ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။
လမ်းမှာလည်း လယ်ကွင်းအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်လာတော့ ကျမကလည်း ဟိုအပင်ကဘာလဲ၊ ဒီအပင်ဘာနှင့် ကြည့်ရူ့ စပ်စုလာရသပေါ့လေ။ ယူကလစ်ပင်တွေ တွေ့ ရတော့ ကျမက ယူကလစ်ပင်တွေဟာ မြေဆီလွှာကိုပြုန်းစေတယ်၊ မိုခေါင်စေတယ်ဆိုတော့ အမျိုးသားကလည်း နေကြာပင်တွေကို လူတွေက စိုက်လို့ သာ စိုက်နေတာ သူကလည်း စိုက်ပြီးရင် မြေဆီကို စုပ်ယူသွားလို့မြေဇာချရင် တော်တော်နှင့် မတက်ဘူးလို့ရှင်းပြပြန်ပါတယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာ စိုက်ပျိုးမဖြစ်တဲ့ မြေတွေပြပြီ ဒီမြေတွေက ကျစ်လို့လယ်၊ ယာ အနေနှင့် အသုံးမပြုနိုင်ဘူးလို့ပြပြန်ပါတယ်။ တစ်နေရာရောက်တော့ ဒါက ဆားကျင်းတဲ့။ စစ်ကိုင်းမရောက်ခင် ရထားလမ်းဘေးမှာ မုဆိုးချုံးရွာနားမှာ မြေကနေ သဘာဝအလျှောက် ဖြစ်နေတဲ့ ဆားကျင်းပါ (ရွာလား၊ မြို့ လားဆိုတာ ကျမ သေခြာတော့ မပြောတတ်ပါဘူ။)။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်က စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ဆားချက်စက်ရုံရှိတယ်လို့ပထဝီမှာသင်ဘူးတာကို သတိရသွားပါတယ်။ စိတ်ကလည်း ဩ ဒါပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်မိသေး။
စစ်ကိုင်းမြို့ ရဲ့ ဘေးက ဖြတ်လာတော့ ကောင်းမူတော်ဘုရားကြီးကို အဝေးကတည်းက ဖူးမျှော်ရတယ်။ အဲ ရွှေရောင်သုတ်ခါစ ထိပ်လေးမှာ ရွှေရောင်၊ အောက်ကတော့ ထုံးသင်္ဃန်းအတိုင်း ရှိသေးတယ်။ ရထားပေါ်ကမြင်ကွင်းဟာ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးပေါ်က ဘုရားတွေကို တမျှော်တခေါ်ပဲ ဖူးမြင်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတံတားကို ဖြတ်တော့ တံတားအဟောင်းပေါ်က နေ တံတားအသစ်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ငေးမောရင်းဖြတ်လာခဲ့ရတယ်။ ကျမရင်မှာ တော်တော်ကြည်နုးမိပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က လူတွေ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာ ဘယ်လိုများ နေထိုင်ခဲ့ပါလိပ်လို့ လဲ စဉ်စားမိတယ်။ ဆရာမ ဒေါ်နုနုရည် (အင်းဝ)ရေးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဆရာမ ပြောဘူးတာလေးတောင် သတိရတယ်။ ဆရာမက အင်းဝသူဆိုတော့ သူက အင်းဝတံတားလို့ပြောလေ့ရှိပြီး၊ စစ်ကိုင်းက စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်(ဦးဘဆွေရဲ့သမီး)နှင့် တွေ့ ရင် စစ်ကိုင်းတံတား၊ အင်းဝတံတားလို့ငြင်းလေ့ရှိတာလေးကိုပါ။
တံတားဆုံးတော့ ရွှေကြက်ယက်ဘုရားဆိုပြီး ပြပါတယ်။ ကျမ မန္တလေးမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပေမယ့် အဝေးသင်ဆိုတော့ ဘယ်မှနှံနှံစပ်စပ် မရောက်ဘူးပါဘူ။ သူကတော့ အထက်တန်းကျောင်းကို မန္တလေးမှာ နေလာတာဆိုတော့ တော်တော်လေးသိပါတယ်။ ခွင့်ရက်ကြောင့် ကျမသွားလိုလှတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ အင်းဝ နှင့် မေမြို့ တို့ ကို မသွားခဲ့ရပါဘူး။ နောက်တစ်ခေါက် ရောက်အောင် သွားမယ်လို့အားခဲးထားပါတယ်။ မြေမြို့ ၊ မင်းကွန်းနှင့် မုံရွာတွေ၊ အမရပူရက မဟာဂန္တာရုံကျောင်းတွေကို ငယ်ငယ်က မကြာခဏ ရောက်လေ့၊ လှူလေ့ရှိပေမယ့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးကို မေမေသွားတဲ့ အခေါက်က ကျမ မလိုက်နိုင်ခဲ့လို့ခုထိအောင် မရောက်ဘူးသေးပါဘူး။ ရောက်အောင်သွားဘို့တစ်ခါ တေးမှတ်ထားရမှာပေါ့လေ။ (ဧရာဝတီမြစ်က ရေတွေကိုလည်း ဘယ်လောက်ရော့သွားလဲလို့မှတ်ထားပါတယ်၊ ရေလယ်မှာ သောင်ထွန်း နတ်သမီးနေတဲ့ ကျွန်းပဲဖြစ်မလား၊ တံငါနှင့် ကိုင်းလုတ်တဲ့ ကျွန်ပဲ ဖြစ်မလားပါပဲ)
ဒီလို စိတ်ညစ်စရာ၊ ပျော်စရာတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ ကျမတို့ခရီးစဉ်လေးဟာ မန္တလေးမြို့ကို (၁၂)နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ ဝင်လာတော့ တစ်စခန်းရပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမရဲ့ ခရီးစဉ်လေး တစ်ခုဟာ ဒီလို အတွေ့ အကြုံလေးတွေ စုံနေအောင်တွေ့ ခဲ့ရတာကို ကျမဖြင့် တော်တော်လေးကို မှတ်မှတ်သားသားလေး သတိရနေမိပါတယ်။ ကျမတို့ လူမျိုးတွေက ဆရာ အော်ပီကျယ်ပြောသွားဘူး သလိုပဲ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ပျော်ပါတယ်။ ခုလည်းကြည့်လေ ကျမလည်း ခရီးစကတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ မဆိုစလောက် စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာတွေကို မေ့ပြီး ခုတော့လည်း ကြည်နုးစိတ်လေး၊ ပျော်ရွှင်စိတ်လေး ဝင်လာခဲ့တာပါပဲ။ အင်း ခရီးသွားတဲ့ အရသာကို ဒါတွေကြောင့် ဥရောပကလူတွေက သဘောကျ-ကျတာဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့ လို့တွေးရင် နောက်တစ်ခါ ဘယ်အချိန် ခရီးထွက်နိုင်မလဲလို့… မျှော်တွေးရင်၊ ကျမလိုပဲ ခရီးသွား နှစ်သက်သူတွေ စဉ်စားမိကျမယ်လို့ထင်ရင် နိဂုံးချုတ်လိုက်ပါပြီ။ ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 1:59 AM